၎င်းသည်စပ်စုလိုသော်လည်း အကယ်၍ လူသားသည်သူသည်လေထုထဲသို့နေ့စဉ်ထုတ်လွှတ်သောအဆိပ်အတောက်အားလုံးကိုစွန့်ပစ်နိုင်သည်ဆိုပါကအမှုအရာသည်ယခုအဖြစ် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးဆက်များမှာပိုမိုဆိုးရွားလာလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပျက်သင့်သည်မဟုတ်လော
မည်သည့်သက်ရှိသတ္တဝါကိုမဆိုအသက်ရှူနိုင်သည့်အန္တရယ်ရှိသောလေထုသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမည်မှသိရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လူသားများသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုညစ်ညမ်းစေသဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝမျှတမှုကိုများစွာဆုံးရှုံးစေခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။ သစ်ဘူမိဗေဒခေတ်: အ မနော.
အရှင်, ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရောင်ခြည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှကာကွယ်ပေးသည်ဆိုသောအချို့သော Aerosol များရှိကြောင်းသူတို့သိရှိနိုင်ခဲ့သည်။။ ထို့အပြင်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ပါကကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်သည်ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ၀.၅ မှ ၁.၁ ဒီဂရီမြင့်တက်လာပြီးကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ထိုထက်မကရှိနေသေးသည်။
သုတေသီများကတွေ့ရှိခဲ့သည် ဤထုတ်လွှတ်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ဒေသအဆင့်တွင်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ကမ္ဘာ့အချို့ဒေသများတွင်မိုးရွာသွန်းမှုကဲ့သို့သောရာသီဥတုပုံစံများကိုပြုပြင်ခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်အရှေ့အာရှတွင်မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ရာသီဥတုအလွန်ဆိုးရွားခြင်းများသိသိသာသာများပြားလာသည်။
ဒီတော့ဘာလုပ်ရမလဲ လွယ်ကူသောအဖြေမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုနာကျင်စေသည့်အရာမှာယခုရာစု၌ကျွန်ုပ်တို့အား“ လုံခြုံ” စေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့အရာဟာညစ်ညမ်းစေဖို့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမှားယွင်းမှုတစ်ခုပဲ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ငါတို့ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆိုးမြင်? ဖြစ်နိုင်စရာ။ သို့သော်အရာများအလုပ်လုပ်ပုံအကောင်းမြင်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » လေထုသန့်ရှင်းခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးဆက်များကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်